Narcan® (နာကန်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Narcan® (နာကန်)
Narcan® (နာကန်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Narcan® (နာကန်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Narcan® (နာကန်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေဆေးတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံး၀ သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ စိတ်ကြွဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲထားကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက် လည်းသုံးပါတယ်။ ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်း အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးပါတယ်။
စိတ်ကြွဆေးဆန့်ကျင်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ opiateလက်ခံနေရာတွေကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေရဲ့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Narcan® (နာကန်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း တိတိကျကျအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း အကုန်လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
Narcan® ဆေးကို ထိုးဆေးအနေနဲ့ သင့်ဆရာဝန်ဆေးခန်း ဆေးရုံတွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ကျိကျိအမှုန့်တွေပါနေမယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် ဆေးထည့်တဲ့ဖန်ပုလင်းသို့ခွက်ငယ် ကွဲနေမယ်ဆိုရင် သို့ ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင် မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဆေးကိုရော အသုံးပြုတဲ့အပ်တွေကိုပါ
ဆေးထိုးအပ်တွေကို ပြန်မသုံးသင့်ပါဘူး။ အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုစွန့်ပစ်သင့်လဲဆိုတာကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူထံမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှစည်းကမ်းတွေအကုန် လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်သူကို မေးနိုင်ပါတယ်။
Narcan® (နာကန်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Narcan® (နာကန်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Narcan® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Narcan® (နာကန်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Narcan® (နာကန်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ ယားခြင်း ၊အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ခြင်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းများ ဖောရောင်ခြင်းစတဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ဘယ်ဆေးတွေက Narcan® (နာကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Narcan®ဆေးအသုံးပြုနေတုန်း စိတ်ကြွဆေးမည်သည့်ဆေးမျိုးကိုမဆို အသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အနာသက်သာဆေးတွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အခြားဆေးတွေအားလုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန်ကိုပြောပြထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Narcan® (နာကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Narcan® (နာကန်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Narcan® (နာကန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
နှာခေါင်းဖျန်းဆေး နှာခေါင်းပေါက်ထဲ့သို့ ဖြန်းခြင်း
Narcan®နှာခေါင်းဖျန်းဆေးအသုံးပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေကို ခေါ်ရပါမယ်။
ထပ်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်က ဆန့်ကျင်မယ့် opioidဆေးရဲ့ ပမာဏ၊ အမျိုးအစား၊ အသုံးပြုထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအပေါ်မူတည်နေပါတယ်။
နှာခေါင်းဖျန်းဆေးတစ်ခါသုံးပမာဏကို နှာခေါင်နှစ်းပေါက်တလှည့်စီ ဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးအကူအညီမရောက်သေးခင်မှာ လူနာက ဆေးကိုတုန့်ပြန်မှုတွေဖြစ်ပြီး
အသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေပြန်ပေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းဖျန်းဆေးအသစ်နဲ့ နောက်ထပ်ဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပြီး လူနာရဲ့အသက်ကိုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လို ချင်တဲ့အကျိုးကို ၂မိန်စ်၃မိနစ်အတွင်း မရဘူးဆိုရင် နှာခေါင်းဖျန်ေးဆးအသစ်နဲ့ ထပ်ဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမပေးသေးဘူး၊ ထပ်ပြီးတော့ဆေးရနိုင်သေးတယ်ဆိုရင် အရေးပေါ်အကူအညီမလာမချင်း ၂မိနစ်၃မိနစ်တိုင်းမှာ နှာခေါင်းဖြိန်းဆေးအသစ်နဲ့ ထပ်ထပ်ဖြန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီးအသက်ရှူအထောက်အကုူတွေ ပေးခြင်းကလည်း အရေးပေါ်အကုူအညီစောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အထောက်အကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Narcan® (နာကန်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်း နှာခေါင်းဖျန်းဆေး နှာခေါင်းပေါက်ထဲ့သို့ ဖြန်းခြင်း
Narcan® (နာကန်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
နှာခေါင်းဖျန်းဆေး naloxone hydrochloride 4mg in 0.1mL
အလွန်အကျွံအသုံးပြုမိတဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ စိတ်ကြွခြင်း၊ လစ်ဟာဟာဖြစ်ခြင်း၊ ဖျော့တော့ခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။